Who were Bengali, so called Rohingya?: ရခိုင်မျိုးစောင့်အုပ်စု မှ ထုတ်ပြန်ချက်
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 10:49 PM
hii, myo sanng animal, go and fuck your mother huh!!! ,,, mother fucker, let;s me say to u first!!! fuck you, fuck off, then fuck yourself.
ကုလားလို့ မပြောစေချင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ ဟာ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး အစွန်းရောက်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ကုလားဆိုတာ ဟိန္ဒူတွေ လည်းရှိပါတယ်။ ကုလား၊ တရုတ်၊ နီဂရိုး အားလုံးအေးဆးပါ။ အဓိက က တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ကမ္ဘာ့ပြဿနာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံအသီးသီး မှာ လူမျိုးပေါင်းစုံကို ပြဿနာလိုက် ရှာနေကြတဲ့ မူဆလင်တွေ ( အစွန်းရောက် မူဆလင်+ အစွန်းမရောက်လူဖေါက် မူဆလင်) ကိစ္စ ကိုဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲဆိုတာပဲ။
ဒို့ ညီအစ်ကို ရခိုင်တွေ အားလုံးခဏတောင့်ထားပါ။ မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ ဗုဒ္ဓသာသနာတော် ကို အသက်ထက်ဆုံး ကာကွယ် စောင့်ရှောက်တာ ကြောင့် သမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်းနတ်မြတ် တွေ ဟာ ရခိုင်လူမျိုးကို ကြည့်ရှုစောင်မ မှာပါ။ ဒီမူဆလင်တွေ ဘယ်လောက်ပဲလူများများ၊ ဘယ်လိုပဲအောက်တန်းကျတဲ့ နည်းတွေ သုံးသုံး ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘက်မှာ အမှန်တရားရှိပါတယ်။
အချိန်တန် ရင် မူဆလင်ကောင်တွေ သူ့ စားရိတ် နဲ့ သူသွားမှာပါ။
မူဆလင်ပြဿနာ ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်နေရကြတာပါ။ ဒီကောင်တွေ မကြာတော့ပါဘူး။ ဒီကောင်တွေ ဟာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ပြဿနာ လိုက်ရှာနေတဲ့ ပြဿနာကောင်တွေပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး ကလူတွေဟာ မူဆလင်ပြဿနာကောင်တွေ ကို မကြာခင် တစ်နည်းနည်းနဲ့ရှင်းတော့မှာ ပါ။
မြန်မာယောင်ဆောင်ပြီး ရေးတဲ့ မူဆလင် ကွန်မန့် တွေ ကို သတိထားပါ။ ဘယ်မြန်မာ၊ရခိုင် ၊ ခရစ်ယာန်၊ ဟိန္ဒူ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကမှ မူဆလင်တွေ ဘက်လိုက်ပြီး ကွန်မန့် မပေးကြပါဘူး။
ဓမ္မ နဲ့အဓ္ဓမ ပွဲမှာ နောက်ဆုံးမှာ ဓမ္မ ကသာ အောင်နိုင်ပြီး အဓ္ဓမ ၀ါဒီ တို့ ဟာ နောက်ဆုံးမှာ တနည်းနည်းနဲ့ ကျရှုံးကြရမှာပါ။
ဒါဟာ လောက ရဲ့ အမှန်တရားပါပဲ။
ရှေ့ ခိုးကာ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှကူးလာသူများ
လီးကုလား= ခွေးလီးထစ်ကို ခေါင်းမှာဆောင်း
ကာ ပင်လယ်ရပ်ခြားမှ ကူးလာသူများ
(မှတ်ချက်။ပင်လယ်ရပ်ခြားမှ ကူးလာသော ကြောင့်ကူးလာ=ကုလားဟု ခေါ်တွင်သည်)
တောင်မစားသောကြောင့် ယူမည့်သူမရှိ၍ ၄င်းတို့၏ မိခင်ကို ပြန်လိုးသော သူများ။ အထက်ပါလီး
ကုလားများသည် လူမဟုတ်သောကြောင့် လူ့
ကာတွင် လူ့အရေးကိုတောင်းဆိုနေသော လီး
ကုလားများကို မြင်တွေ့နိုင်သည် မြန်မာတိုင်း
ရင်းသားများအနေဖြင့် လူမဖြစ်သေးသော ကု